गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरण : सांसद पाठक र आले पनि संलग्न रहेको आरोप « Deshko News
गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरण : सांसद पाठक र आले पनि संलग्न रहेको आरोप
करोडौंको कमिसन काण्डमा निवर्तमान संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासहित नेकपाका सांसद डा. सूर्य पाठक र प्रेम आलेको नाम सार्वजनिक भएको छ । पाठक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य पनि हुन् ।
बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार प्रकरणको अडियो सार्वजनिक गरेका विजयप्रकाश मिश्रले पाठक र आलेपनि भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको खुलाएका हुन् । मिश्रले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपाका सांसदद्धय डा. पाठक र आलेको संलग्नता प्रत्यक्ष रुपमा रहेको खुलासा गरेका हुुन् ।
उनका अनुुसार लेखा समितिमा सबै काम मिलाइदिने जिम्मेवारी डा.पाठकले लिएका थिए । उनले डा.पाठक र आलेमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मिश्रको यो आरोपमा सत्यता रहेको लेखा समितिका काँग्रेससम्बद्ध सदस्यहरुको पनि सहमति रहेको छ ।
मिश्रले उक्त अडियो सार्वजनिक गरेकै दिन डा.पाठककै जोडबलमा उक्त लेखा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । त्यस बैठकमा पनि उनले मिश्रको बारेमा निकै चासो लिएका थिए । उनले ती मिश्रलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारबाही गर्न भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गर्न समितिका सभापति र सचिवलाई दबाब दिएका थिए ।
अर्कातर्फ डा. पाठकको सम्पर्कबाटै ती मिश्रलाई लेखा समितिमा विज्ञ बनाएर ल्याइएको थियो । मिश्रलाई डा।पाठकले नै पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समक्ष पुर्याएको बताइन्छ ।
शुरुदेखि नै यिनीहरुले सबै प्रोजेक्टहरु मिलेर गर्ने भनी काम गर्दै आएकोमा कमिसन नमिलेपछि यी दुई बीच पनि मनमुटाव भएको बुझिएको छ । विजय मिश्रले सांसद पाठकसँग जापानको पिआर रहेको आरोप अन्तर्वार्ताका क्रममा लगाएका छन् ।